Sida Lacag Loogu Wareejin Karo Bangiga Bangiga Kale Si Fudud -
Bogga ugu weyn Sida Lacag Loogu Wareejin Karo Bangiga Bangiga Kale Si Fudud
Sida Lacag Loogu Wareejin Karo Bangiga Bangiga Kale Si Fudud
isha sawirka: www.unsplash.com
Ma waxaad raadinaysaa inaad lacag u dirto dibadda ama albaabka kuugu dhow koontadaada bangiga? Ama waxaa laga yaabaa inaad ku jirto dhammaadkii qaabilaadda? Aynu kaa qaadno sidaad si badbaado leh oo fudud ugu gudbin karto/uga wareejin karto koontadaada bangiyada bangiyada kala duwan iyo dalal kala duwan sidoo kale!
Waa Maxay Xawilaadaha Bangigu?
Xawilaadda bangiga ama wareejinta siligga waa hab lacag -bixin elektaroonik ah oo u oggolaanaysa dadka ama hay'adaha inay dhexdooda lacagaha ku kala wareejiyaan adduunka.
Adeeggii ugu horreeyay ee wareejinta siligga waxaa bilaabay Western Union qiyaastii 1972. Waxay u adeegsan jirtay shabakadaha telegraph si ay lacag ugu wareejiso waxaana caadi ahaan loogu yeeraa “wareejinta telegrafiga”.
Dalalka qaarkood, magacani wali wuu jiraa. Xawilaad bangi ama silig, hadba kii aad doorbido, waxaa laga samayn karaa koonto bangi ilaa mid kale. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa lambar tixraac oo gaar ah iyo faahfaahinta koontada bangiga oo aad ku bixin karto lacagtaada.
Waxaa jira habab kala duwan oo aad lacagaha ugu wareejin kartid tusaale ahaan adiga oo adeegsanaya xirmada bangiga ee internetka ee qofka helaya lacagta, taleefanka, ama boostada. Xawaaladaha bangigu waa ikhtiyaarka ugu fiican kuwa aan haysan kaarka deynta.
Xawilaadda bangigu sidoo kale waa hab lacag bixin oo aad iyo aad u ammaan badan, maaddaama labada qof ee xisaabta haystaa ay haystaan ​​aqoonsi la caddeeyey si loo ilaaliyo labadaba.
Si loo soo koobo wax walba, habka wax kala iibsiga bangiga waxaa lagu dhammayn karaa saddex tallaabo:
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad siiso bangiga faahfaahinta dalabka, “xaddiga lacagta aad rabto inaad wareejiso” ama tixraaca, “meesha lacagta loo baahan yahay in loo diro.”
Marka labaad, macmiilku wuxuu fuliyaa wareejinta bangiga isaga oo adeegsanaya macluumaadka adiga iyo bangigu bixiyeen.
Ugu dambayntii, bangigu wuu iswaafajin doonaa, wargelin doonaa oo ku soo diri doonaa lacagaha. Dhaqaalaha aad heshaa wuxuu ka yaraan doonaa wixii laguu soo diray maxaa yeelay bangiga helaya wuxuu lacag ka qaadaa lacagta la wareejinayo.
Waa Maxay Faa'iidooyinka Xawilaadda Bangigu?
Xawaaladaha bangigu waa habka ugu caansan uguna hufan ee loo adeegsado wareejinta lacagaha. Waxay inta badan adeegsadaan macaamiisha lacag la'aanta ah si ay ugu wareejiyaan lacagtooda.
Heerka sare ee wax -ku -oolnimada iyo nabadgelyadooda ayaa ka dhigtay kuwo aad u sarreeya oo caan ka ah adduunka oo dhan.
Hoosta, waxaan eegi doonaa waxa ku kalifay inta badan shaqsiyaadka inay ku dhacaan wareejinta bangiga;
Xawaaladaha bangigu waxay oggolaadaan in lacagaha shakhsiyaadka ama hay'adaha loo gudbiyo kuwa kale iyada oo weli la ilaalinayo wax -ku -oolnimada la xidhiidha dhaq -dhaqaaqa dhaqsaha leh ee lacagta.
Soo diraha ayaa si dhaqso ah u bilaabi kara wareejinta siligga isla markaana qofka helaya wuxuu heli karaa lacagaha isla markiiba isagoo ka dhigaya habka macaamil-saaxiibtinimo.
Sida caadiga ah ma jirto bangi ku jira lacagta oo macaamilku ma laha dib -u -celin.
Xawaaladaha bangigu waxay u oggolaanayaan dadka adduunka ku nool inay si ammaan ah lacag ugu wareejiyaan deegaannada iyo hay'adaha maaliyadeed tanina waa mid elektaroonik ah.
Xawaaladaha bangigu waxay sii wadeen inay ku koraan daafaha dunida iyadoo dadka intiisa badani ay hadda adeegsadaan telebanking/ telefon bangiga iyagoo tixgelinaya xaqiiqda ah in boqolkiiba in ka badan dadka ay leeyihiin taleefannada casriga ah.
Akhri: Sida Lacagta Paypal Loogu Wareejiyo Koontada Bangiga Si Sahlan
Sideen Lacag uga Xawilayaa Bangiga Bangiga Baanka Kale?
Si aan bangiga lacag ugu wareejiyo mid kale gaar ahaan xawaaladaha dibedda ah ee lacagta lagu kala wareejiyo inta u dhexeysa xisaabaadka bangiyada ee kala duwan, waxaan adeegsan doonnaa mareegaha bangiga ee onlaynka ah.
Tallaabooyinka soo socda ayaa kugu hagaya sida loo wareejiyo lacagaha;
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad booqato mareegaha bangigaaga oo aad isku xidho labada koonto. Soo gal bangiga lacagta diraya, oo guji tabka “Wareejinta Lacagaha”, ka dibna “Xawilaadaha Dibadda” ama “Xisaabaadka Dibadda” oo ugu dambayn guji “Ku dar koonto bannaanka ah”.
Si loogu daro koonto bannaanka ah, bangiga helaya waa inuu ka xaqiijiyaa bangiga diraya si uu u xaqiijiyo milkiilaha xaqa u leh koontada ee bangiga helaya.
Bangiga diraya ayaa weyddiin doona koontada iyo lambarka waddada ee bangiga helaya haddii ay tahay keyd kayd ama hubin. Markaad isticmaaleyso internetka, waxaad ka heli kartaa marin -habaabinta iyo lambarka xisaabta tabka “Faahfaahinta Xisaabta”. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad geliso foom lambarka amniga ama biinka si aad u hesho macluumaadkan abka dhexdiisa. Waxa kale oo aad ka heli kartaa marin -u -haynta ama lambarka koontada koonto bangi xagga hoose ee jeegga bangigaas.
Markaa waxaa lagaa doonayaa inaad xaqiijiso koontada bangiga helaya midkood; bixinta magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee koontada helaya oo u diyaari xawaaladaha dibedda ama bilow hal ama laba kayd yar oo ku jira bangiga helaya bangiga diraya halkaas oo ay tahay inaad gasho koontada bangiga ee la helo si aad u aragto inta aad ku shubtay waa.
Marka xigta waa inaad xaqiijisaa dhigashada lagu sameeyay bangiga helaya. Gal akoonka bangiga ee diraya, ee ku jira “Hubi qaybta kaydkaaga”, geli qaddarka aad ku wareejisay bangiga helaya oo xaqiiji. Tani waxay qaadan kartaa ilaa 1-2 maalmood oo shaqo.
Markaad xaqiijiso, waxaad hadda bilaabi kartaa inaad u kala wareejiso labada bangi walwal la'aan.
Intaa waxaa dheer,
Iyada oo ku xidhan siyaasadaha bangigaaga, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara xad ku saabsan inta aad mar wareejin karto.
Inta badan xawilaadaha bangiga ee aad u baahan tahay inaad ku samayso nolol maalmeedkaaga, sida is -qoritaanka dhigaalka tooska ah ee jeeggaaga ama isticmaalka biilka lacag -bixinta ee onlaynka ah, ayaa ah noocyada wareejinta lacagaha elektiroonigga ah (EFTs), halkaasoo lacagta dib loogu soo diro iyadoo la adeegsanayo shabakadaha lacag -bixinta elektiroonigga ah .
Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee wareejinta waxay ku dhacdaa shabakadda wareejinta lacagaha elektiroonigga ah ee loo yaqaan Guriga La Caddeeyay (ACH).
Iyada oo la bixinayo ACH, bangiyadu waxay bixiyaan lacagaha iyagoo ka wakiil ah macaamiisha, hubinta xisaabaadka iyo xaqiijinta qaddarka, dhaqaajinta lacagta 1-3 maalmood oo shaqo gudahood.
Akhri: Bangiyadu Sidee Lacag u Sameeyaan
Siyaabo Kala Duwan Oo Aad Lacag Ugu Wareejin Kartid Akoon Bangi Mid Kale
Haddii aad u baahan tahay inaad ku wareejiso lacag aad u badan, wareejinta siliggu waxay kaa caawin kartaa inaad si dhaqso ah oo ammaan ah lacag u dirto. Wareejinta siligga waxaa loola jeedaa wareejin elektaroonik ah iyada oo loo marayo shabakad ay maamusho wakaaladaha adeegga wareejinta iyo bangiyada adduunka.
Wareejinta siligga ayaa inta badan ku imaanaysa lacag maadaama dadka soo diraa ay bixiyaan lacagaha lagu kala iibsanayo bangiga xawilaadda. Lacagtani way kala duwan tahay bangiyada kale ama haddii macaamilku yahay mid gudaha ah ama mid caalami ah. Wareejinta siligga ama lacag -bixinta siliggu waxay oggolaanaysaa in lacagta si dhaqso ah oo ammaan ah loo dhaqaajiyo iyada oo aan la beddelin lacag caddaan ah xitaa haddii soo diraha iyo qaataha ay joogaan meelo kala duwan.
Haddii aad u dirto wareejin silig bangiga kale ee ku yaal Mareykanka, maaliyaddu waxay ku heli kartaa hal maalin shaqo gudaheeda ama xitaa saacado yar gudahood laakiin dirista wareejinta siligga caalamiga ah ayaa laga yaabaa inay qaadato waqti aad u wanaagsan si loo hawlgeliyo.
Wareejinta siligga lama celin karo marka la farsameeyo markaa waa inaad ka taxaddartaa markaad lacag u xawisho qof.
Qofka diraha ah waa inuu u dhowaadaa hay'ad bangi oo u soo gudbiyaa macluumaadka soo socda bangiga;
Magaca qaataha, cinwaanka, lambarka taleefanka iyo macluumaadka kale ee shakhsiga si loo fududeeyo macaamilka.
Macluumaadka bangiga qaataha waxaa ka mid ah lambarka koontada, magaca bangiga, lambarka waddada ama “SWIFT code ama IBAN code ama BIC code” si uu bangigu u ogaado meesha loo dirayo lacagta.
Akhri: Sida Loo Helo Lacag Badan Isla Markaad 18 Jirto
Ka hor inta aan la bilaabin macaamilka, soo diraha waa inuu dhigaa xoogaa lacag ah si loo diro iyo khidmadda macaamilka oo ay go'aamiso bangiga diraya. Bangiga diraya ayaa markaa farriin u diraya hab ammaan ah sida SWIFT bangiga qaataha si loo nadiifiyo lacagaha.
Bangiga qaataha ayaa laga codsan doonaa inuu fuliyo lacag bixinta iyadoo la raacayo tilmaamaha lagu bixiyay farriinta ay ka helaan bangiga diraya.
Lacagtu waxay qaadan kartaa wakhti, waxay noqon kartaa saacado ama maalmo, si loo helo koontada qaataha laga bilaabo wakhtiga diraha uu bilaabay macaamilka.
Xawilaadaha u dhexeeya Xisaabaadka Ku Xiran
Haddii aad leedahay xisaabo badan oo ku jira isla bangiga sida koontada jeegga iyo koontada keydka oo aad rabto inaad xawilaad lacageed ka samaysato akoonnadaas, waa wax fudud oo dhaqso badan inaad dejiso wareejinta.
Waxaan ugu yeeri karnaa “wareejin gudaha ah” oo maaliyadeed maadaama ay u dhaxeyso xisaabaadka bangiga ee isku xiran. Marka, u tag bangigaaga bangiga onlaynka ah ama abka moobiilka oo raadi ikhtiyaarro ku saabsan sida loo sameeyo lacag wareejin.
Caadi ahaan, waa inaad doorataa inaad samaysato wareejin hal mar ah ama beddelid soo noqnoqota. Bangiyada badankood waxay kuu oggolaan doonaan inaad dooratid inaad dhaqaallo u wareejiso isla markiiba ama inaad dejiso wareejin mustaqbalka ah taariikh gaar ah.
Waxaa suurtogal ah in lacag lagu wareejiyo isla maalin shaqo gudaheed inta labada koonto ay ku xiran yihiin.
Laakiin haddii ay dhacdo inaad ku xirto koonto cusub markii ugu horreysay, waxay kugu qaadan doontaa 2-3 maalmood oo shaqo si aad u dhammaystirto hawsha.
Waxaa jira barnaamijyo lacag bixin oo isku faca-faca ah oo hadda la heli karo; waxaa ka mid ah; Venmo, PayPal, CashApp, iyo kuwo kaleba, tanina waxay gacan ka geysaneysaa dib u wareejinta lacagta hore iyo gadaal inta u dhaxaysa dadka isku wareejinta isku filka ah.
Barnaamijyadan ayaa ah hab dhaqsi ah oo lacag loogu diro saaxiibbada, qoysaska ama lacag lagu siiyo meheradaha yaryar, badanaana kuma yimaadaan lacag ama haddii ay lacag tahay, way hooseysaa mana dareemi kartid qanjarkeeda maadaama ay la mid tahay wax yar boqolkiiba wadarta lacagta macaamilka.
Kahor intaadan u adeegsan barnaamijyadan si aad lacag ugu wareejiso, waa inaad marka hore barataa khidmadaha lacag -wareejinta, waqtiga xayeysiintooda.
Tusaale ahaan, Zelle waxay leedahay xaddid macaamil ganacsi oo ah $ 500 toddobaadkii, Venmo, “$ 4,999 ama wax ka yar toddobaadkii” iyo kuwo kale. Qaar ka mid ah barnaamijyada lacag -bixinta ma taageeraan macaamilka caalamiga ah halka kuwa kale ay kaa qaadi doonaan lacag badan oo macaamil ganacsi haddii aad rabto inaad lacag u dirto qof dal kale jooga.
Way fududahay in la sameeyo koontada lacag bixinta ee isku faca ah iyadoo la adeegsanayo goob kasta oo aad dooratay. Waxaad u baahan tahay inaad iska qorto koonto ka dibna ku xirto koontadaada bangiga ama kaarka amaahda ama kaarka bangiga.
Haddii ay dhacdo in lagaa rabo inaad bixiso macluumaad dheeri ah oo laga yaabo ujeeddooyin amniga sida macluumaadka iyo furaha sirta ah, waa inaad buuxisaa si aad u kordhiso amniga koontadaada.
Marka koontadaada la dejiyo waxaad awoodi doontaa inaad lacag u dirto dhowr gujis kadib markaad samaysato. Wakhtiga ay ku qaadato in lacag lagu wareejiyo way kala duwan tahay iyadoo ku xiran adeegga lacag-bixinta ee isku faca aad isticmaasho.
Tani waxay u dhaxayn kartaa meel kasta dhowr ilbidhiqsi ilaa saddex maalmood oo shaqo. Lacagta waxaa lagu keydin doonaa barnaamijka lacag -bixinta P2P illaa iyo inta aan weli gacanta lagu soo gelin koontadaada bangiga ee gaarka ah.
Hubinta Waraaqaha Qorista
Beddel kale oo fudud oo suurtogal ah oo lagu wareejin karo maaliyaddu waa mid duugoobay ama farsamo-yar, ikhtiyaar caadi ah, “qoritaanka jeeg”. Markaad qorto jeeg, waxaad u oggolaanaysaa bangigaaga inuu lacag ku wareejiyo qofka qaata ama mid ka mid ah xisaabahaaga bangiga kale.
Hirgelinta dhigaalka jeegagga moobiilka ayaa fududeeyay nolosha qaybta bangiyada halkaas oo aad inta badan ku qori karto kuna dhigi karto jeeg raaxada gurigaaga adiga oo adeegsanaya barnaamijyada bangiyada mobilada.
Haddii aad rabto inaad si dhaqso ah u wareejiso lacagta, uma maleynayo in jeegaggu kuu noqon doono ikhtiyaarka kugu habboon. Sababtoo ah kuwani waxay qaataan maalmo shaqo ka hor inta habka wareejinta la dhammaystirin.
Waqti cayiman, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad qorto jeeg markaa waxaad u baahan tahay inaad mareyso faahfaahintaan hoose.
Akhri: Hadda Lacag baan u Baahanahay !!! Raac talaabooyinkan fudud si aad lacag u hesho
Waxaan jeegga u kala jarnay qaybo kala duwan waxaanan sharraxnay ujeeddada mid kasta;
Macluumaadkaaga: kani wuxuu ku yaal geeska bidix ee kore ee jeeggaaga kaas oo kaa doonaya inaad buuxiso magacaaga iyo cinwaanka aad ku haysato faylka bangiga.
Lambarka Hubinta: kani wuxuu ku yaal geesaha kore iyo hoose ee jeegga. Waa waxtar haddii ay dhacdo in buugga jeeggaaga la xado ama haddii si khiyaano ah looga baxo. Lambarka Hubinta ayaa kaa caawin kara dabagalka.
Taariikhda: waa inaad ku dhejisaa taariikhda wax kala iibsiga xariiqda taariikhda.
Magaca qaataha: waxaa jira xarriiq dheer oo dheer oo ku yaal dhexda jeegga sida caadiga ah waxaa ka horeeya “ku bixi amarka”. Waa meesha aad ku qori karto magaca qaataha, “kani wuxuu noqon karaa qof ama urur”.
Qadarka Lacag -bixinta: jeegga waxaa ku yaal laba dhibic oo lagaa rabo inaad ku qorto qaddarka lacag -bixinta. Barta kowaad waxay kaa rabtaa inaad qaddar lacag -bixin ku qorto lambar ahaan kan kalena wuxuu kaa doonayaa inaad ku qorto ereyo. Si uu bangigu labada dhinacba ugu kala caddeeyo fudaydka iyo hufnaanta.
Khadka Memo: wuxuu ku yaal geeska bidix ee hoose ee jeegga. In kasta oo ay tahay mid ikhtiyaari ah, waxaan kugula talineynaa inaadan ka tagin. Waxay kaa caawinaysaa inaad wax badan ka ogaato lacag -bixinta la sameeyay iyo xafididda diiwaannada maaliyadda.
Magaca bangiga: halkan waxaad ka heli doontaa astaanta bangiga iyo cinwaanka.
Tijaabada iyo lambarka xisaabta. Kuwani waa silsilado tirooyin ah oo ku yaal salka jeegga waana lama huraan marka aad dejinayso dhigaal toos ah ama aad dalbanayso jeegagga.
Saxiixa: waxaa jira xarriiq madhan oo ku yaal geeska midigta hoose oo ay tahay inaad saxiixdo. Tani waxay tilmaamaysaa inaad awood u siisay inaad lacag kala baxdo koontadaada.
Xawaaladaha Bangigu ma sugan yihiin?
Si aad u samayso bangi ama wareejin silig, xisaabiye kasta waa inuu caddeeyaa aqoonsigooda oo uu xaqiijiyaa lahaanshaha koontada. Dib -u -soo -ceshadu uma badna, in kasta oo fiilooyin la soo celin karo.
Macluumaadka ku jira fiilooyinka ayaa si ammaan ah loogu gudbiyaa iyada oo loo marayo hababka isgaarsiinta qarsoodiga dhammaad-ilaa-dhammaad.
Qiimaha wareejinta siligga bangigu aad ayuu u kala duwan yahay, waxayna ku xiran tahay bangiga aad u wareejiso lacagaha iyo meesha ay ku taal; waddamada qaarkood ayaa laga yaabaa inay lacag badan ka qaadaan macaamilidda lacagaha.
Wareejinta siligga oo inta badan lagu sameeyo xafiisyada lacagta caddaanka ah waxaa loogu talagalay in lagu kala wareejiyo dadka is aaminay. Waa ammaan darro in lacag loogu diro taleefan qof aan la garanayn, “waxay noqon kartaa khiyaano” si loogu ururiyo xafiiska lacagta.
Qofka lacagta qaata ayaa laga yaabaa inuusan bixin wax alla wixii alaab ah ama adeegyo ah oo ay ku ballanqaadeen beddelkii bixinta ka dib markii ay soo ururiyeen lacagtooda laakiin taa beddelkeeda ay baaba'aan. Markaa waxaad u baahan tahay inaad qofka aaminto ka hor intaadan u dirin lacagta.
Tani waxay ka mid tahay khiyaamooyinka caadiga ah ee inta badan lagu magacaabo Western Union.
Akhri: Miisaaniyadaha Vanguard ee ugu Fiican | Ma u qalantaa lacagtaada
Waa Maxay Khataraha I Soo Wajahan Isticmaalka Xawaaladaha Bangiga?
Guud ahaan marka la hadlayo, wareejinta siliggu guud ahaan waa badbaado iyo ammaan inta aad taqaan qofka qaata.
Halkan, waxaa lagaa rabaa inaad caddeyso aqoonsigooda si wareejinta qarsoon aysan macquul ahayn, waxaan u tixgelin doonnaa mid sharci ah.
Maaddaama wareejinnada siligga caalamiga ah ee asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka ay kormeeraan “Xafiiska Xakamaynta Hantida Dibadda”, oo ah hay’ad ka tirsan Maaliyadda Mareykanka.
Hay'addu waxay hubisaa amniga xawilaadaha lacagaha gaar ahaan marka lacagta dibadda loo diro, waxay ku dadaalayaan inay hubiyaan inaysan lacagtu ku dhicin gacmo xun sida; maalgelinta weerarada argagixisada iyo lacagaha la dhaqay.
Hay'addu waxay kaloo awood u leedahay inay ka hortagto in lacag la aado waddamada aan u hoggaansamin cunaqabateynta dowladda Mareykanka.
Haddii ay dhacdo mid ka mid ah duruufaha kor ku xusan, bangiga diraya ayaa qaboojin doona lacagaha oo isla markiiba joojinaya wareejinta siligga.
Haa, wareejinta bangigu waxay noqon kartaa mid fudud. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani kaa caawiyay inaad hesho faham wanaagsan oo ku saabsan wareejinta bangiga. Waqtigan xaadirka ah waa inaad awood u yeelatid inaad doorato doorashada saxda ah hab kasta oo ay tahay inaad isticmaasho markaad wareejineyso lacagahaaga. Xor baad u tahay inaad ka tagto faallo hoose.
Ma samayn karaa wareejin bangi oo caalami ah?
Miyaan u baahanahay inaan tago bangi si aan macaamil ula sameeyo?
Maya, bangiyada intarneedka inta badan haddaanay ahayn bangiyada maanta oo dhan.
Muddo intee le'eg ayay wareejinta bangigu ku qaadataa isla bangiga?
Wax kayar saacadaha 24
Lacag ma ku wareejin karaa bangi kale?
Muddo intee le'eg ayay xawilaadaha bangiyadu u dhexeeyaan bangiyada kala duwan?
3 maalmood celcelis ahaan
Qiimaha bangiga: https://www.bankrate.com/
Xawaaladda Adduunka: https://www.worldremit.com/
Sida Lacagta Paypal Loogu Wareejiyo Koontada Bangiga Si Sahlan
20 Fikradaha Ganacsi Bilowga Ugu Fiican Si Lacag Loogu Sameeyo 2021
Bangiyadu Sidee Lacag u Sameeyaan
21ka Shabakadood ee Maareynta Lacagta ee ugu sarreeya 2021 -ka
Sida Lacagta Looga Wareejiyo App -ka Lacagta Loogu Gudbiyo Koontada Bangiga Si Fudud
Waa Maxay Dhaqan Dhaqameedka: Sida Uu U Shaqeeyo | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2021 Faallooyinka
Dhaqaale dhaqameed, qaabdhismeedku waxa uu udub dhexaad u yahay caadooyinka, dhaqanka, iyo qiyamka la ixtiraamo muddo ka dib.
Bangiyada ugu Fiican Oregon 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Saamaynta Covid 19 waxay keentay aqoonsi buuxa oo ah in xidhiidhka bini aadamka ee xidhiidhka bangiyada uu wali yahay…
Ku Wareeji Lacagta Bangiga Ameerika Chase | Tusaha Tallaabo-tallaabo ee fudud ee 2022
Inta badan, ka wareejinta lacagta akoonkaaga Bank of America una wareejiso Chase badiyaa waa badbaado, fudud…
Bangiyada ugu Fiican Denver sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Iyada oo leh 96 bangi iyo 75 ururo deyn oo ku yaal Denver iyo nawaaxigeeda (depositaccount.com), raadinta bangiga ugu fiican…
Bangiyada ugu Fiican Colorado 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Go'aan ka gaadhista akoontiga bangiga waxa ay u ekaan kartaa in ay yara adagtahay hay'adaha maaliyadeed ee badan iyo fursadaha akoonnada…
Sidee & Meesha laga Helo Quarters Xilliga Yaraanta ee 2022
Hoos-u-dhac ku yimi afar-geesood ayaa ka dhashay faafitaanka coronavirus-ka kaas oo keenay…
Sida Loo Ciyaaro Ciyaaraha Onlineka Ah Ee Bilaashka Ah Si Aad Lacag U Hesho